Ma Ogtahay Madaxweyne | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home BOGGA HORE Ma Ogtahay Madaxweyne
Ma Ogtahay Madaxweyne
Ma ogtahay madaxweyne, in ganacsatadii magaalada Muqdisho iyo ag-agaarkeeda ku nool ay ka cabanayaan lacagta Koonteenarka dekedda lagu dejiyo, oo halkii koonteenar laga qaado in ka badan 600 oo doolar, taasina keentay sida ay sheegayaan ganacsatadu in Balcad iyo Jowhar laga cuno badeeco kasoo degtey Boosaaso oo iyadaba canshuur maahee aan wax kale laga qaadin. Halka Berberana halka Koonteenar 80 doolar oo keliya laga qaado dejintiisa.
Ustaadoow, ma ogtahay in intaas ay ku darayaan ganacsatadu in gobolada Jubooyinka iyo Shabeelada hoosena laga cuno badeeco Kismaayo kasoo degta.
Mudane madaxweyne mala socotaa, in magaaladii cidwax kala gadata la la’yahay oo noloshii ciriiri kujirto. Oo suuqyadii Bakaaraha iyo Suuq-bacaad ganacsatadii danyarta ahayd iska fadh fadhiyaan.
Ustaadoow , mala socotaa in Soomaali badan oo wax-garad ah oo dowlada jecel kuna taageersan ay ka xunyihiin in ay arkaan adoo xubin ka ah madasha cusub ee hogaamiyeyaasha ee dhawaan la sameeyey adigoo madaxweynihii federaalka ah. Waxayna leeyihiin miyaa la waayey si kale oo loo kala saaro madaxweynaha federaalka iyo madax-goboleedyada.
Madaxweyne, ma maqashay hadalada ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobey NICKOLOS KAY oo dalka Britain kaso jeeda uu ku leeyahay “ Haweenku 30% waa in ay noqdaan baarlamaanka soo socda” halka uu dhanka kalena uu sheegay in odayaashu ay hawl-gab ka noqdaan dhanka siyaasada dhalinyaraduna xilka la wareegaan.
Haddaba ustaadow ma na loo weydiin karaa mudane NICK KAY in dalka Britain oo mudo dheer dimoqraadiyad ka jirtay in haweenku 30% ay ku haystaan kuraasta baarlamaanka. Arinta ku saabsan dhalinyarada iyo hawl-gabka, ma noo sheegi karaa ergaygu da’da dadka ugu badan ee goleyaasha sharci-dejinta ee Britain kujira gaar ahaan lords-ka iyo house of commons-ka. Xogtu waxay sheegaysaa in 60 iyo wixii ka sareeya ay da’doodu u badantahay. Haddaba Britain oo boqolaal sano dimoqraadiyad ka jirtay wixii ka hirgeli waayey miyuu ergeygu rabaa in Soomaaliya laga hirgeliyo!!!!
Previous articleMadaxbanaanida maaliyadeed iyo mushaharsiinta shisheeye maxaa kaaga dhex muuqda?
Next articleKoonfur Is waraysataye, Waqooyi yaa u maqan?